ब्याच नम्बर ६९ : बाफ रे, कोट भित्रको कपासमा एक किलो सेतो हेरोइन !
२०७८ चैत ०२ गते २०:३४ मा प्रकाशित
त्यसैले प्रहरीभन्दा अपराधी एक कदम अगाडि हुन्छन् भनिन्छ पनि। तर जति कदम अगाडि भए पनि कुनै न कुनै दिन त कानुनको फन्दामा परिहाल्छन् नै। त्यस्तै एक घटना लेख्छु आज। त्यो बेलामा दक्षिण एसियाली हेरोइन अमेरिका....
ब्याच नम्बर ६९ : काठमाडौँमा समातिएका अपराधी रातारात भारत कसरी पुग्छन् ?
२०७८ पुष २८ गते १९:५५ मा प्रकाशित
तर अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा कुन देश आर्थिक सूचकाङ्कमा कति नम्बरमा छ अनि त्यसको भूगोल कति छ जस्ता कुराले प्रभाव पार्दैन। मेरो अनुभव यही हो। संयुक्त अप्रेसनहरू गर्दा होस् या अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहभागी हुँदा नै उनीहरूले....
यो पालि चाहिँ अलि फरक विषयमा कुरा गर्न मन लाग्यो। यो केससँग त जोडिन्छ। अपराध अनुसन्धान, अझ भनौँ संगठित अपराधको अनुसन्धानमा यो अति महत्वपूर्ण पाटो पनि हो। अनुसन्धानमा २ प्रकारका सूचना वा प्रमाण संकलन हुन्छन्।....
ब्याच नम्बर ६९ : आँखै अगाडि तालिबानले गरेको त्यो सुसाइड आक्रमण
२०७८ कात्तिक ०३ गते १८:३० मा प्रकाशित
नेपालमा चलेको १२ वर्षको द्वन्द्व असर अहिलेसम्म देखिन्छ। अफगानिस्तानको तुलनामा त नेपालमा के नै द्वन्द्व भएको हो र! तै पनि हाम्रो आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई कहाँ पुर्‍यायो। अफगानिस्तानमा त निरन्तर द्वन्द्व जारी छ। त्यहाँको आर्थिक र....